Premiere Pro CC – Afထgy Platform
22 thoughts on “Premiere Pro CC”
ASC Macalin intee kaala soo xariiraa priv ahaan waxaa rabay inaa iska diiwaan geliyo courses kaada waxaa igu dhib ah sida loo bixinaayo FEE ga lacagta qidmada ah runtii What’sApp waan ku daalay mase waad badasheen .
Mahdsanid anigan maanta kusoo biiray waana goob indhaha uroon casharo fcna leh wlhi
Qaabke video editing isaga diwaan geliya mudane
Salaamu caleikum! Waxaa mahad is kaleh allah SWT oo ii suura galiyey inan ka mid noqdo ardayda wax ka barata Afoogy. Marka xigta ustad Salmaan oo asna ii fududeeyey helida waxbarasho tayeysan, waxbadana iga caawisa mustaqbalka dhow insha allah. Xaqiiqatan lama soo koobi karo dareenkeyga maanta iyo sidaan u jeclahay xirfada muqaal sameynta insha allah inan ka miro dhaliyo ayan ku hami weynahay. ❤
Asc dhamaan walalaha halkan ku jiro macaliminta ardayda iyo dhamaan bahda afoogy wan idiin salaamay waxan ahay arday cusub 02/02/2022 barasha wanagsan saaxiibyaal
Abdiwali Yakub Mohamed
Waxaan u mahadcelinaayaa Macallin Salman Maadow oo juhdi, waqti iyo maskaxba geliyay sidii cid walba oo danaynaysa in si online ah wax uga baran karto, midda kale sharxaadda macallinka oo aad u boobsiis ah in uu xawaaraha yareeyo ayaan ku talin lahaa.
Tan xigta waxaa Courseka ka maqan oo ahayd in lagu soo daro waxey ila tahay Chapter seven halka Titles keliya lagu qorey in lagu daro Logos and Samples
asc.wr marka hore aad ayaan usalaamayaa bahda afoogy gaar ahaan macallinkayga ustaad salmaan maadaw oo run ahaantii intaan coursigaan ku soo biirinba wax badan ka faaidaystay markaan coursigaan ku soo biirayna waxaan ka helay aqoon badan oo aan u baahnaa alle haidin barakeeyo waxaan rajaynayaa in badan inaan ka faaidaysan doono platformkan afoogy iyo macallimintayda sharafta badan leh jannatul firdaws alle haidinka abaal mariyo wixii tala ii muuqday ee kalena waxaan ku soo qoray gunaanadka iyo qiimayntayda koorsada waxaan rajaynayaa inaad arki doontaan inshaa allaah
lkn waxaan mar kale xoojin lahaa inaad noogu soo dartaan coursooyinga programing languege ka ah waayo websideyada soomalida inta badan cilmigaas ma bixiyaan aadbaad u mahadsantihiin markale [ جزاكم الله جنة الفردوس الأعلى]